ESO မပါဘဲ ဘာတွေလေ့လာနိုင်မလဲ။ | ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်လေ့လာမှုများ
Maite Ncuesa | 18/06/2022 23:42 | လေ့ကျင့်ရေး
အဆိုပါသင်တန်းသည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အခွင့်အလမ်းသစ်များရှာဖွေရန် ပြင်ဆင်မှုပေးသည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်၊ ရာထူးလျှောက်ထားရန် လိုအပ်သောဘွဲ့သည် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းကိုတင်ပြရန်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်ဖြစ်လာသည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတွင် ထပ်ခါတလဲလဲ ဖြစ်နေသည့် အခြေအနေမျိုး ရှိသည်- အဆင့်မြင့် လေ့ကျင့်မှု ပြီးမြောက်ရန် လိုအပ်သော ဇွဲလုံ့လ မရှိခြင်း ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တကယ်အရေးကြီးတာက ပရော်ဖက်ရှင်နယ်က သူ့ကိုယ်သူ ပြန်လည်ဆန်းသစ်ဖို့ အခွင့်အလမ်းပေးနေတာပါပဲ။. ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ပါမေးခွန်းကိုဖြေဆိုသည် - မပါဘဲဘာလေ့လာရမည်နည်း။ ESO? ဆက်လက်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် မတူညီသော အခြားရွေးချယ်စရာများကို ဆွေးနွေးကြသည်။
1 FP ၏ အလယ်အလတ် ဒီဂရီသို့ ဝင်ခွင့်
4 မသင်မနေရ အလယ်တန်းပညာရေး ပြီးမြောက်ခြင်း။
FP ၏ အလယ်အလတ် ဒီဂရီသို့ ဝင်ခွင့်
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းကမ်းလှမ်းချက်သည် ၎င်း၏အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောအဆင့်အတွက် ထင်ရှားသည်။ ထို့အပြင်၊ ပရိုဂရမ်များသည် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ရှုထောင့်မှ ကုန်သွယ်မှုတစ်ခုကို လေ့လာရန် သီအိုရီနှင့် လက်တွေ့ကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။ အလယ်တန်းအဆင့် စက်ဝန်းတစ်ခုကို လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။. ခေါင်းစဉ်သည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဆင့်တွင် တံခါးဖွင့်ပေးသည်။ ယင်းအခြေအနေတွင် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း လိုက်နာရမည့် လိုအပ်ချက် နှစ်ခုရှိသည်။ အသက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ သင်သည် 17 နှစ်ထက်ကျော်လွန်နေရပါမည်။ ထို့အတူ သင်တန်းတက်ရန် စာမေးပွဲဖြေဆိုရပါမည်။ မတူညီသော အထူးပြုမှုများတွင် လှည့်ပတ်နေသော ကျယ်ပြန့်သော အဆိုပြုချက်များကို သင်တွေ့နိုင်သည်။
ဒုတိယဘာသာစကားကို ကျွမ်းကျင်စွာ တတ်မြောက်ခြင်းသည် အလုပ်ရှာဖွေမှုတွင် ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်ကို မြှင့်တင်ပေးသည့် အကျိုးကျေးဇူးများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဥပမာ- အင်္ဂလိပ်စာ ကောင်းကောင်း တတ်နိုင်ရင် အလုပ်လျှောက်ဖို့ မရှိမဖြစ် လိုအပ်ချက် ဖြစ်လာနိုင်တယ်။. ဤကိစ္စတွင်၊ ဤနယ်ပယ်တွင်ရရှိထားသောသင်တန်းသည် လိုချင်သောအရည်အချင်းများနှင့်ကိုက်ညီကြောင်း အသိအမှတ်ပြုပါသည်။ ကောင်းပြီ၊ ဘာသာစကားတစ်ခုလေ့လာခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်ရန် ESO ဘွဲ့ရှိရန်မလိုအပ်ပါ။ ထို့ကြောင့်၊ မသင်မနေရ အလယ်တန်းပညာရေးကို မလိုအပ်ဘဲ အနာဂတ်အတွက် ကွဲပြားခြားနားသော အခြားရွေးချယ်စရာများကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနေသူများသည် ဤဖြစ်နိုင်ချေကို အကဲဖြတ်နိုင်ပါသည်။
သင်တန်းရွေးချယ်မှုများသည် တစ်နှစ်ပတ်လုံး သက်တမ်းတိုးပါသည်။ အမှန်တော့၊ နွေရာသီကာလတွင် ရှိနေသော တက္ကသိုလ်များသည် ဇူလိုင်၊ သြဂုတ်နှင့် စက်တင်ဘာ လများအတွက် စီစဉ်ထားသော သင်တန်းများဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် တိုတောင်းသော သင်တန်းများဖြစ်သည်။. ပရိုဂရမ်တစ်ခုစီသို့ဝင်ရောက်ခွင့်အတွက် လိုအပ်ချက်များကိုစစ်ဆေးရန်၊ ခေါ်ဆိုမှု၏အခြေခံများကို တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရန် အကြံပြုလိုပါသည်။ သို့ရာတွင်၊ အခါအားလျော်စွာ၊ ၎င်းတို့သည် သာမန်လူထုကို ရည်ရွယ်သည့် အဆိုပြုချက်ဖြစ်ကြောင်း ထောက်ပြသင့်သည်။ တစ်နည်းဆိုရသော် အရေးကြီးဆုံးလိုအပ်ချက်မှာ ကျောင်းသားသည် အစည်းအဝေးများ၏ အဓိကအကြောင်းအရာကို စိတ်ဝင်စားမှုရှိရန်ဖြစ်သည်။
မသင်မနေရ အလယ်တန်းပညာရေး ပြီးမြောက်ခြင်း။
ESO မပြီးဘဲနဲ့ သူတို့ဝင်ရောက်နိုင်တဲ့ လေ့လာမှုတွေကို အံ့သြနေတဲ့သူက အရင်လမ်းကြောင်းကို ပြီးအောင်လုပ်ဖို့ မေးခွန်းရဲ့ အာရုံစိုက်မှုကိုလည်း ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ ပြောရရင်၊ စောင့်ဆိုင်းနေသော ပန်းတိုင်ကို ကျော်ဖြတ်ရန် အချိန်ရောက်လာပြီ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ (ဒါက ဇာတ်ကောင်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အမြင်ရှိရင်)။ အဲဒီအခါမှာ တကယ်အရေးကြီးတာက အတိတ်ကို လွမ်းဆွတ်ဖို့ အာရုံစိုက်မနေပါနဲ့။ Melancholy သည် ဖြစ်နိုင်သည့်အရာ၏ လေယာဉ်နှင့် ချိတ်ဆက်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ ယနေ့ခေတ်တွင် အစီအစဉ်ဆွဲခြင်းနှင့် တက်ကြွသောအမူအကျင့်များ ပေါ်ပေါက်လာသည်။ ESO ပြီးပါက ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သည် ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းခွင်ဘဝကို စတင်ရန် အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဟု မှတ်သားထားပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ သင်သည် အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးတွင် တက်ကြွစွာ စတင်နိုင်သည် ။
ထို့အပြင်၊ သင်သည် သင်၏လေ့လာမှုများကို အချိန်ကြာမြင့်စွာ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ ဘယ်ခရီးစဉ်တွေကို သင် ဆင်ခြင်နိုင်မလဲ။ ပထမနေရာတွင်၊ ဘွဲ့အမည်သည် Baccalaureate သို့ဝင်ရောက်ရန်လွယ်ကူစေသည်။ ထို့အပြင်၊ အလယ်အလတ်အဆင့်လေ့ကျင့်ရေးစက်ဝန်းကို လေ့လာရန် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါသည်။
လက်ရှိတွင် သင်တန်းကမ်းလှမ်းမှုသည် ကျယ်ပြန့်ပြီး အခြေအနေအမျိုးမျိုးရှိ ကျောင်းသားများ၏ လိုအပ်ချက်များကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသည်။ ဥပမာ၊ အရွယ်ရောက်ပြီးသူသင်တန်းများသည် ငယ်ရွယ်စဉ်တွင် ဘွဲ့တစ်ခုခုရရန် အခွင့်အရေးမရှိသူများအတွက် အခွင့်အလမ်းသစ်များ ပေးသည်။ ဥပမာ သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက် တက္ကသိုလ်များသည် ယဉ်ကျေးမှုသို့ ဝင်ရောက်ရန် လွယ်ကူစေသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်လေ့လာမှုများ » NOTICIAS » လေ့ကျင့်ရေး » ESO မပါဘဲ ဘာတွေလေ့လာနိုင်မလဲ။